XA UYEKA UKUTHUMELA II-SELFIE, EZI ZINTO ZILI-10 ZIYA KWENZEKA - UNXIBELELWANO
Xa uyeka ukuthumela ii-selfie, ezi zinto zili-10 ziya kwenzeka
Njengamillennials amaninzi, ndichitha ixesha elininzi kwimidiya yoluntu kunakuyo nayiphi na enye indawo. Njengomphuli we-selfie, esona sizathu sokuba ndoyise isigaba seminyaka elishumi sokufikisa. Nangona kunjalo, inokuba ngumgca ococekileyo phakathi kokubhiyozela ukuzithemba kwakho kunye nokuzikhathaza ngendlela abanye abakubona ngayo. Akukho nto iphosakeleyo ekubhaleni ubomi bakho namhlanje, kodwa xa uyeka ukuxhomekeka kokuqinisekiswa kweeselfie zakho, ezi zinto zilandelayo ziya kwenzeka.
Imifanekiso yakho iya kuba sempilweni
Ngokuqinisekileyo, ukubona umfanekiso wakho kukunyusa ixesha elifutshane kumfanekiso wakho, kodwa ekugqibeleni oku kukonyusa okwethutyana. Nokuba ungaluphi na uhlobo lomzimba onawo, umfanekiso wokwenene oqinisekileyo ngokuza nokuzixabisa ngaphezu kweembonakalo zakho-into eneefoto ezinqabileyo ukubamba.
Uya Kuphulaphula Kakuhle
Amajelo eendaba asekuhlaleni kakhulu idityanisiwe kumnqweno wokulawula abanye, kuba umntu uzibona engaphezulu kwabanye. Enye indlela ukungacingeli kwabanye okuzibonakalisa ngayo kukuphulaphula ngokungathandabuzekiyo. Oku kuthetha ukuba umntu umamela abanye kuphela ngenjongo yokuphikisa okanye ukugxeka into abayithethayo. Ngokucacileyo, ukuziqhelanisa okunjalo yindlela engafanelekanga yokunxibelelana nabanye.Intengiso
iincwadi ezinokutshintsha ubomi bakho
Ingqondo yakho iya kuphucuka
Ukusukela ekubeni ukusetyenziswa gwenxa kweendaba zosasazo kutshanje kunxulunyaniswe nento njenge ezinye zeemeko zengqondo , Kubalulekile ukulungelelanisa umdla wethu kwimidiya ekwi-intanethi kunye nenyani kwihlabathi elingaxhunyiwe kwi-intanethi. Olunye uphononongo lubonisa ukutsaleleka kwiiselfie kwimithombo yeendaba zentlalo kunokuba yinto ebalulekileyo ekuphuhliseni iingxaki ngoxinzelelo, ukungalunganga kobuntu, kunye nedysmorphia yomzimba, phakathi kwabanye.
Uya kuba nokuzincama ngakumbi kubudlelwane
Kwangokunjalo, ukuthanda ukuthanda ukuthumela ii-selfies kunokugqibela kulonakalisa ubudlelwane. Ukusetyenziswa gwenxa kweendaba zosasazo kunxulunyaniswa nokwanda kwe-narcissism, enokukwenza ukuzingca kulwalamano lwakho . Khumbula ukuba imbonakalo yethu inzulu kuphela kulusu. Inkangeleko entle ngokuqinisekileyo yexeshana, kwaye umhlobo olungileyo okanye ezinye iimfuno ezibalulekileyo zokuba nobuntu bokuzixhasa. Akukho buhlobo bunokuba sempilweni ukuba umntu omnye uzithanda kakhulu kangangokuba angakhathali ngomnye.
Uya kuba nexabiso lokuzixabisa
Kwangokunjalo, kuxhomekeka kwabanye ukusabela okuhle kwinkangeleko yakho ukuze uzive ufanelekile umtyibilizi . Kuba ukuzixabisa kwakho kufanelekile ukuba uzimele kwizimvo zabanye abantu ngawe, akunamsebenzi nokuba abanye bayifumana imifanekiso yakho inomtsalane okanye hayi. Ukuze ube ngumntu opheleleyo kwaye owonwabileyo, ekuphela komntu ofuna ukukufumana uxabisekile njengawe. Ngokuxabisa ngokugqithiseleyo izimvo zabanye ngee-selfie zakho, ubeka emngciphekweni wokuphinda uzichaze ukubaluleka kwakho ngendlela abanye abakubona ngayo.Intengiso
Uya Khuseleka Ngakumbi
Ukuzithemba yenye indawo engafanele kuchaphazeleka yindlela abanye abakubona ngayo. Ukuba ukuzithemba kwakho kuxhomekeke kumagqabantshintshi aqinisekileyo kunye nokuthanda kwiiselfie zakho, kuyakuthatha kuphela intetho engalunganga okanye eyothusayo yokwenza ukuba uqhekeke ngokupheleleyo. Umntu ngamnye kuthi wahlukile ngokwenyani kwaye unokuzisa etafileni, kwaye akukho mntu kufuneka avumele ukukrokra okanye ukungakhathali kwabanye kuchaphazele indlela obubona ngayo ubuntu bakho kunye namandla akho.
Uya kuba nesimo sengqondo esingcono
Ukuzikhulula ekukhathazekeni malunga nendlela abanye abakubona ngayo kunokuba yinto entle kwisimo sakho sengqondo. Kwakhona, ngokuxhalaba kakhulu ngendlela abanye abaphawula ngayo okanye abasabela ngayo kwiiselfie zethu, sinika abanye abantu amandla okulawula imo yethu yokucinga kunye nemibono. Ukulungelelana ngakumbi malunga nezinto esizithumelayo, okanye ukuthatha ikhefu elifutshane ekuthumeleni iiselfie, kunokwenza imimangaliso yokukubuyisela kulawulo lwesimo sakho sengqondo, ukuzithemba kunye nemood.
Uya kuba nenkcazo yokwenene yobuhle
Ayithumeli kuphela ii-selfies ezininzi ezigxininisa kakhulu kwabanye izimvo ngathi, kodwa ukukhathalela kuphela inkangeleko yakho kunokuphazamisa inkcazo yakho yobuhle. Kumnandi ukuzithemba kwiifoto, kodwa ukuba uqala ukugxininisa kwinkangeleko yakho kunezinye iimpawu, ubeka emngciphekweni wokuba ngaphezulu. I-Selfies lulongezo olufanelekileyo kubukho bakho kwimidiya yoluntu, ukuba nje uxabisa ngokucacileyo ezinye izinto ngawe. Zama ukulinganisa ukuxabisa ukujonga okuhle kwi-intanethi ngokuzibandakanya kwimixholo ekrelekrele, iminyhadala yehlabathi, inzululwazi kunye nophuhliso lwetekhnoloji, kunye nokukhathalela abanye kwizangqa zakho zentlalo.Intengiso
Uya kuncipha ngokuNgcitshiswa
Ukongeza, ukukhula ngakumbi kwe-narcissistic kunokukwenza othanda ukuba nomsindo . Apho amagqabantshintshi asetyenzisiweyo engena mpembelelo incinci kuwe, ukuthembela kwabanye ukuthathelwa ingqalelo ukuzichaza kuthetha ukuba ukugxekwa kubetha kakhulu. Ukuthintela olu tyekelo lokuphendula ngakumbi kukungakhathali kubalulekile ekugcineni ukujonga okunempilo ngokwakho.
Uya kuba Ngakumbi Ngalo Mzuzu
Umbutho wezengqondo zaseMelika ukhankanya ukuthatha ngaphezulu kweeselfie ezintathu ngosuku njenge eyona ngxaki . Nokuba uyavuma okanye awuvumelani nolu luhlu, inye into eqinisekileyo: ukuthatha iifoto zakho ngaphezulu kathathu ngemini ngokungathandabuzekiyo kuya kuphazamisa amandla akho okuphila ubomi ngalo mzuzu. Khumbula ukuba ukubeka phantsi ifowuni yakho kunye namava omzuzwana wento eyiyo kunokuba ngamava okusindisa kunye namandla.
Lilonke, akukho nto iphosakeleyo ngokwabelana ngokuzithemba kwakho kunye nokuzithemba komzimba nehlabathi, kodwa khumbula ukuba ungubani ungaphezulu kakhulu kunoko kungaphezulu. Olunye uluvo lwee-selfies zakho akufuneki lube nefuthe elibonakalayo kwindlela obuphila ngayo ubomi bakho, ngaphandle kokubandakanyeka kwimidiya yoluntu. Wonke umntu unokumxabisa umntu ongazicingeliyo kwaye okhathalayo, kwaye ezi mpawu zihlala zibonakala kakhulu ebantwini abanesimo sokuzithemba nokuzithemba. Ukukhula njengomntu kunye nokuhlakulela umfanekiso ophucukileyo wokuziphatha ngokwakho kwahlukile kwingqwalaselo esiyifumana kwabanye. Ukufuna ibhalansi kubukho beendaba zosasazo kunokubonakala ngathi kulucelomngeni ekuqaleni, kodwa kuyindlela enomvuzo kwezi ndlela zintsha nezinomdla zonxibelelwano.Intengiso
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: USusanne Nilsson ngeflickr.com
uloyiko lwento engaziwayo
kutheni iindaba zimbi kangaka
izibonelelo zempilo ze dragon fruit
Ungatshintsha njani ube ngcono
Ungaphuma njani kwingxaki yobomi obuphakathi
Usana Olusandul 'ukuzalwa Uyilo Sebenza Izifo Eziqhelekileyo Impumelelo Yengqondo